Ana m aṅụ iyi! Ma ọ bụ ka m kwesịrị? | Martech Zone
Saturday, January 27, 2007 Tuesday, October 4, 2011 Douglas Karr
Paula Mooney dere na nso nso a ntinye banyere ndị na-ede blọgụ cussing. Achọrọ m ịmata ihe ị chere:
Ikwu eziokwu, enwere blọọgụ ole na ole m na-eleta ebe m gụrụ site na ya… ha niile na-atọ ọchị. M na-agbasi mbọ ike ịrapara na blọọgụ na-akwado ma ọ bụ na-a swearụ iyi n'ihi enweghị ihe kpatara ya. Ọ bụrụ na ejiri iwe kwuo ya, agaghị m alaghachi maka nleta nke abụọ.
Ihe atọ mere na ị gaghị agbado na blọọgụ gị:
Okwu gị na net nwere ike ịnọ ogologo oge karịa ka ị ga - anọ. Ọ ga-abụ ihe nwute na-echeta maka cussing.
Enwere ọtụtụ okwu ị nwere ike ịnụtụbeghị… gbalịa ụfọdụ ndị ọhụrụ.
Cussing nwere ike ịkpasu mmadụ iwe, ọ bụghị ịkwanye mmadụ iwe ga-ewe onye ọ bụla iwe.
Kwuo echiche gị. M na-aghọ onye mkpịsị ụkwụ? Mara: Ọ dịghị cussing!
Mac Mara mma
Jenụwarị 27, 2007 na 10:38 PM
Nke a bụ ezigbo mma! Naanị ị na-egwu egwu, Douglas.
Daalụ maka mkpu.
Jenụwarị 28, 2007 na 1:02 PM
Achọtara m njikọ a Lifehacker taa maka ndị ahụ chọrọ ụfọdụ okwu:
Kevin Hillstrom kwuru
Jenụwarị 28, 2007 na 1:17 PM
Otu n'ime blọọgụ m na-agbaso na-agụnye ị ofụ iyi dị ịrịba ama. Onye ahụ na-ewute onye ọrụ ya na ọrụ ụlọ ọrụ ya na-eduzi, ọ dịkwa ka ọ bụ naanị ụzọ a ga-esi gosipụta mmetụta ya bụ n'ezie. O yighị ka ọ ga-a swearụ iyi na ngalaba metụtara ụlọ ọrụ. Agbanyeghi na echeghi m na asusu ya kwesiri, o doro anya na o na-ewute ya, ma enwere m ike ichota nke a n'asusu o choro.
Agaghị m a swearụ iyi na blọọgụ m. Achọrọ m ka ndị na-agbafe ọdịnaya m lekwasịrị anya na ọdịnaya ahụ, ọ bụghị asụsụ eji ewepụta ya.
Jenụwarị 28, 2007 na 4:43 PM
Cussing bu ntughari nye m, a na m ahukwa umu nwanyi karie iji okwu iyi ma obu okwu ndi ozo gaara enwetara gi onu ncha n'ubum. O yiri ka ha chere na ọ na-eme ha ka ọ dị jụụ, ma ọ bụ na ha ga-enwerịrị nnwere onwe iji ghara ichegbu onwe ha banyere ihe ndị mmadụ na-eche. Otutu mmadu agaghi agwa gi; ha na-ezere blog gị! Ọ bụrụ na mmadụ enweghị ike igbochi iji okwu nkọcha na blọọgụ ha, mgbe ahụ ha adịghị mkpa ịde blọgụ. Dị ka e kwuru, ọ ga-adị na engines ọchụchọ maka ogologo oge karịa ka anyị chọrọ iche!
Jenụwarị 28, 2007 na 7:04 PM
Echere m na ịaringụ iyi na imeru ihe n'ókè dị mma. Mana ọ bụrụ na ọkwa ọ bụla na-ekwu okwu iyi, m ga-akwụsị ịgụ.
Ọ bụghị naanị na ọ dịghị mkpa.
Jenụwarị 29, 2007 na 2:00 PM
Daalụ maka ịmalite mkparịta ụka ahụ, Doug. Achọghị m ịnụ ikwu okwu rụrụ arụ ma ọ bụ ịgụ okwu rụrụ arụ, agaghị m eme ya n'onwe m. N'ezie enwere uzo ozo di nkowa karie igosiputa onwe ya, obuna iwe. Ọ bụrụ na m na-agụ blogger na-eme ya otu ugboro, ọ gaghị egbochi m ịlaghachi. Ọ bụrụ na ọ bụrụ omume, m ga-ezere saịtị ahụ.
Jenụwarị 29, 2007 na 2:33 PM
Onwe m echere m na okwu iyi bụ naanị okwu nwere mmetụta pụrụ iche. Jiri n'ụzọ kwesịrị ekwesị, ọ bụghị n'efu.
Jenụwarị 29, 2007 na 2:52 PM
Tergha, echere m na iji okwu iyi maka mmetụta pụrụ iche na-egosi obere iwu anyị nwere maka ire anyị ma ọ bụ ikekwe asụsụ Bekee. N’ebe m nọ, ọ dịghị ụzọ ‘kwesịrị ekwesị’ a ga-esi kọchaa ma ọ bụ gụọ iyi. Ọ na-ewute m ịnụ ka ndị mmadụ na-eji okwu ụfọdụ eme ihe dịka ha dị adị, okwu kwa ụbọchị (ha na-abụ ụzọ maka ndị na-eto eto), mgbe ha na-emebi agwa ha n'ezie
Jenụwarị 29, 2007 na 3:00 PM
Gịnịkwa mere okwu ndị a ji akpasu iwe? N'ihi na ha na-enweta site na asụsụ Saxon ma ọ bụ Celtic. Ọ bụrụ na m kwuo “copulate!” ma ọ bụ “merụọ ahụ!” ọ dịghị onye na-ewe iwe. Na njedebe, ọ bụ naanị ajọ mbunobi agbụrụ nke edogoro kemgbe puku afọ.
Jenụwarị 30, 2007 na 4:09 PM
M na occassion cuss, Achọghị m ịma ime ya na blọọgụ m na maka macho ruff gburugburu akụkụ dara ogbenye, anaghị m a swearụ iyi nke ukwuu. Anọ m n'ụlọ oriri na ọ taụvernụ na Baltimore n'oge na-adịbeghị anya na ụmụ nwanyị 2 nọ na-ekwu okwu ma na-ekwu okwu nke ukwuu iwe na-ewe m. Adighi m ekwu okwu mana o nyere m nsogbu. Achọpụtala m na amamihe na ezi obi nke Paula bụ ezigbo ajụjụ. Ọ bụrụ na Paula ekwu na ọ dịghị mma, ebe ahụ ka ịnwere
Jenụwarị 30, 2007 na 4:21 PM
JD, di m na-ekwu, mgbe ọ nụrụ ka nwanyị na-ekwu okwu otu a, ọ na-eme ya ka ọ dị ka aw…. Ọ bụ naanị tray okwu na-agwa m, ịkwesighi ime ya. Ma, ọ dị ka nke ahụ bụ 'omume' ugbu a n'etiti ọtụtụ, echeghị m na ọ na-enyere ha aka ntakịrị.
Jenụwarị 31, 2007 na 5:36 PM
Barb, di gi mara ihe ma ekwerem.
Jenụwarị 30, 2007 na 4:36 PM
Ekwenyere m na 99% nke oge ahụ, ọbụbụ ọnụ adịghị mkpa. Otú ọ dị, e nwere ụfọdụ oge mgbe ọ bụ n'ezie ụzọ kasị mma isi gosipụta mmetụta ị na-enwe banyere ihe. Onwe m, enweghị m ike icheta mgbe m na-akọcha blog, mana m agaghị achịkwa ya.